Uyenza njani iNkqubo yoMbala kwiPowerPoint
Iziphumo zembewu yepapaya
Umxholo ngamnye weMicrosoft PowerPoint ubandakanya isikimu sombala esakhelweyo ukufaka kwizilayidi zakho. Ukuba awuzithandi ukhetho olukhoyo, unokwenza izikimu zombala wesiko kwiPowerPoint oyisebenzisayo kwinkcazo-ntetho yakho.
1Vula ithebhu yoyilo ngokunqakraza kwiRibhoni.
Ithebhu yoyilo ikhaba inyathelo.
MbiniKhetha umbala oyisebenzisayo.
Imibala kwisikimu isebenza njengeyunithi ukwenza intetho yakho ibe nomtsalane.
3Cofa kwiMibala yeMixholo iqhosha uze ukhethe Yenza iMibala eNtsha yoMxholo.
Ibhokisi yencoko yababini yeMibala eNtsha iyavela.
4Cofa iqhosha lombala ofuna ukuwutshintsha.
Umzekelo, ukutshintsha umbala wokuqala we-aksenti, cofa iqhosha leAccent 1. Oku kubiza igalari yokukhetha imibala.
5Khetha umbala owuthandayo.
Ithini imood yakho namhlanje: bomvu, luhlaza, luhlaza, enye into?
6Ukuba awuyithandi nayiphi na inketho, cofa iqhosha lemibala engakumbi.
Oku kuzisa ibhokisi yencoko yababini yemibala.
7Cofa umbala owufunayo uze ucofe u-Kulungile.
Ubuyiselwe umva kwibhokisi yencoko yebhokisi yencoko yababini.
8(Ngokuzithandela) Phinda kwakhona amanyathelo ama-3 ukuya kwayi-6 ngayo nayiphi na eminye imibala ofuna ukuyitshintsha.
Unokukhumbula kwakhona de umxholo wentliziyo yakho.
Inkqubo yakho yemibala egciniweyo igciniwe.
Itheyibhile esemgangathweni yebhokisi yencoko yebhokisi yencoko ibonisa imibala engama-127, kunye nomhlophe, omnyama kunye nemibala yegrey. Ukuze usebenzise umbala ongabonakaliyo kwibhokisi yencoko yababini, cofa indawo yesiqhelo ukujonga ulawulo lombala wesiko.
zide kangakanani iziphumo ebezingalindelekanga ze-minocycline
nini ukuthatha i-lisinopril